Na-atasị Kọfị Onye kere
Ihe ndị magburu onwe ije-eme ka gị n'ụtụtụ keukwu, ya mere, ọ bụghị ihe na-adịchaghị mkpa ka a na-atanye kọfị onye na i nwere ike ịgụ na. Ma ị na-achọ a programmable coffeemaker, a karafe, ma ọ bụ ọbụna a onwe coffeemaker na-eme ka otu iko na oge na ihe niile ị na-agbalị ịchọta. Họrọ si ekwekọghị maxed si na ọrụ, dị ka ihe na integrated grinder ma ọ bụ na-adịgide adịgide nyo, ma ọ bụ kpebie na a isi kọfị igwe na-eme ihe ị chọrọ na-enweghị nsogbu oge.
Ịzụ ntapu kọfị onye ahụ nwere ike ime ka-ezuru onye ọ bụla n'ime ezinụlọ gị gị na-arụkọ ọrụ ma ọ bụ niile? On-eweta coffeemakers na a dịgasị iche iche nke nha-elekọta bụla ìgwè ahụ-na i nwere na-arụ ọrụ, anyị nganga onwe anyị. Mmadụ iri na abụọ- ite kọfị eso pụrụ idowe a nnukwu oge mgbe 8- 4 na Foto Ụlọ Nga -pot kọfị Nsukka ezitekwara iji nweta a obere ìgwè na-adịghị na-ị na-achọghị na fọdụrụ afọdụ kọfị.
Họrọ a kwes ikwafu kọfị onye si emepụta ihe atụ Bonavita ma ọ bụ Melitta ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọgide na kọfị gị ọhụrụ n'ihi na ogologo. Na nsụgharị ndị a na-agụnye a metal karafe na-echebe okpomọkụ, otú i nwere ike ịnọgide na-azụ ọzọ na-ekpo ọkụ cup ugboro ugboro site dum ụbọchị.
The senti nke freshly brewed kọfị nwere ike inyere gị aka bilie, nke mbụ ọṅụṅụ na-enye mmetụta ị ga-esi gị dum ụbọchị malitere ị. Ma ị na-amị kọfị na a na ìgwè ehi ma ọ bụ nanị itiwapụ a-cup ka na-esi ísì site onwe gị elu, a dobe kọfị onye pụrụ inyere gị aka mezuo nke ahụ zuru okè iko kọfị.